ဉာဏ်ကောင်းသော ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > multi အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > ဉာဏ်ကောင်းသော ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
AOX-M စီးရီးအသိဉာဏ်ပေါင်းစုံ, ရိုးရာ potentiometer ဖျက်သိမ်းရေး, တိုးတက်လာသောတည်နေရာတိကျမှန်ကန်မှုကိုသံလိုက်သော induction အကြွင်းမဲ့အာဏာအန်ကုဒ်သုံးပြီးလျှပ်စစ် actuator ဖွင့်နှင့်အခါ actuator ပါဝါပြတ်တောက်ဘက်ထရီတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားသောအဆို့ရှင်အနေအထားရှိနိုင်ပါသည်မလိုအပ်ပါဘူး။
3. Valve mounting စံ
ပေါင်းစုံလျှပ်စစ် actuator turn အသိဉာဏ် AOX-M စီးရီး၏ installation အနားကွပ်မာခ် ISO5210 သို့မဟုတ် DIN3210 စံနှင့်ညီသည်။ အဆို့ရှင်၏အမျိုးမျိုးများအတွက်သင့်လျော်သောရွေးချယ်ဖို့ output ကို drive ကိုအမျိုးအစားအမျိုးမျိုး။
တစ်ခုချင်းစီကို AOX-M စီးရီးအသိဉာဏ်ပေါင်းစုံလျှပ်စစ် actuator turn IS09001 အားဖြင့်အသိအမှတ်ပြုသည့် AOX အရည်အသွေးစနစ်ပေါ်တွင်အခြေခံသည့်တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာထုတ်လုပ်: 2000 ။ အဆိုပါ AOX အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေးစနစ်လက်မှတ်၏ရလဒ်အဖြစ်သငျသညျထုတ်ကုန်အရည်အသွေး၏အာမခံချက်ရှိသည်။
ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးလိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီတစ်ဦးတင်းကျပ်သောအရည်အသွေးကိုစစ်ဆေးခြင်း system ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ AOX တင်းကြပ်စွာထုတ်ကုန်အရည်အသွေးနှင့်ဆက်စပ်သောအားလုံးရှုထောင့်ကိုထိန်းချုပ်ထားခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲ။ , သိပ္ပံနည်းကျစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုစံချိန်စံညွှန်းများတည်ထောင်ရန်စမ်းသပ်ညွှန်းကိန်းများကိုတွက်ချက်နှင့်အရည်အချင်းပြည့်မီသောထုတ်ကုန်များကုမ္ပဏီ၏စဉ်ဆက်မပြတ်နှင့်တည်ငြိမ်ထုတ်လုပ်မှုအာမခံပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီနှစ်ပေါင်း 20 ကျော်အဘို့လျှပ်စစ် actuators များထုတ်လုပ်ရာတွင်ပါဝင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကအပြောင်းအလဲနဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများစက်စင်တာ, CNC တွင်ခုံ, CNC ကြိတ်စက်, CNC တူးဖော်စက်, CNC တူးဖော်စက်, ပလာစမာရေမှုန်ရေမွှားဂဟေဆော်ပစ္စည်းကိရိယာများ, ရေမှုန်ရေမွှားခြောက်သွေ့လိုင်းနှင့်အခြားပစ္စည်းကိရိယာများ, ကြိတ်, ငြီးငွေ့စရာ, တူးဖော်ခြင်း, ပစ်ကြိတ်ခြင်းနှင့်စက်ကိရိယာသည်အခြားအမျိုးအစားများပါဝင်သည် .AOX အဆင့်မြင့်ကိရိယာများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပေါင်းစုံလျှပ်စစ် actuator turn အသိဉာဏ် AOX-M စီးရီး၏အရည်အသွေးကောင်းအာမခံထားသည့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုအပေါ်တင်းကျပ်သောထိန်းချုပ်မှု, ဖွထောကျ။
မေး: AOX-M စီးရီး၏နမူနာအကြောင်းအသိဉာဏ်ပေါင်းစုံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ကုန်ကျစရိတ်သည်အဘယ်အရာလျှပ်စစ် actuator turn?
ဖြေမြောက်အမေရိက, တောင်အမေရိက, အာဖရိက, အရှေ့တောင် Assia နှင့်ဥရောပ။
မေး: သင်customerâ s ကိုကိုယ်ပိုင်နည်းပညာပိုင်းရေးဆွဲသည်နှင့်အညီထုတ်လုပ်ရန်နိုင်သလား?
hot Tags:: ဉာဏ်ကောင်းသော ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်